Cunug Siduu Noloshaada iyo Guurkaaga u Beddelo | Reer Farxad Leh
Cunug Siduu Guurka u Beddelo
“Carruurtu waa dhaxal xagga Rabbiga [Yehowah] laga helo.”—Sabuurradii 127:3
Cunug markuu idiin dhasho waa farxad weyn isla markiina waa masʼuuliyad weyn. Markay waalidnimada idinku cusub tahay waxaad arki doontaan in waqtigiinna iyo xooggiinna ku dhammaanayo daryeelka cunuggiinna. Hurdo yaraan iyo dareemada isbeddelayo baa guurkiinna wax u geysan karo. Sidaad ilmihiinna u korisaan oona guurkiinna u dhawrtaan waa inaad isbeddel sameysaan. Talada Kitaabka sidee bay dhibaatooyinkan idiinku caawin kartaa sidaad u liibaantaan?
1 GARO SIDUU CUNUG NOLOSHAADA U BEDDELI KARO
KITAABKA WUXUU BARAA: “Jacaylku waa samir badan yahay, waana raxiim . . . Nafsaddiisana wax uma doondoono, mana xanaaqo.” (1 Korintos 13:4, 5) Markaad hooyo cusub noqotid waa caadi inaad ilmahaaga aad u tixgelisid. Laakiinse ninkaaga wuxuu u maleyn karaa inaad isaga dayacisid. Sidaa awgeed xusuuso inuu isaga xitaa tixgelin u baahan yahay. Samir iyo raxmad ugu muuji inaad isaga u baahan tahay oo uu qayb ku leeyahay daryeelka ilmihiinna.
“Nimankow . . . afooyinkiinna aqoon kula dhaqma.” (1 Butros 3:7) Garo inay naagtaada xooggeeda cunuggiinna ku bixin doonto. Garbaha masʼuuliyad cusub baa ka saarmatay oo waxay dareemi kartaa welwel, daal badan iyo murugo. Xitaa mararka qaarkood way kuu cadhoon kartaa. Haddaba isku day inaad is dejisid waayo “kii cadhada u gaabiyaa waa ka wanaagsan yahay kii xoog badan.” (Maahmaahyadii 16:32) Garasho yeelo oo waxay u baahan tahay ku taageer.—Maahmaahyadii 14:29.
Aabbayaalow: Habeenkii xitaa xaaskaaga ku caawi hawsha ilmaha. Sidaad naagtaada iyo cunuggaaga waqti badan u siisid waqtiga ad waxyaalaha kale ku bixisid yaree
Hooyooyinow: Markuu ninkaaga cunugga rabo inuu kugu kaalmeeyo oggolow. Haddii uu hawsha si fiican u sameynin ha eedayn laakiin si qabow u tus
2 GUURKIINNA XOOJIYA
KITAABKA WUXUU BARAA: “Waxay noqonayaan isku jidh.” (Bilowgii 2:24) Xitaa haddii qof cusub reerkiinna ku soo birmay xusuusta inaad adiga iyo qofka ad guursatay “isku jidh” tihiin. Wax kasta ad sameyn kartid samee sidaad guurkiinna u xoojisaan.
Xaasaskow caawimaadda nimankiinna ku faraxsanaadaa. Markaad ninkaaga ugu mahadcelisid kaalmayntiisa “caafimaad” camal bay u noqon kartaa. (Maahmaahyadii 12:18) Nimankow naagihiinna u sheega inaad jeceshihiin oo ad qiimeysiin. Ku ammaan siday reerka u maamusho.—Maahmaahyadii 31:10, 28.
“Ninna yuusan doonin waxa isaga qudhiisa u roon, laakiin mid kasta ha doono waxa kan kale u roon.” (1 Korintos 10:24) Mar kasta ku dadaal waxa qofka kale u wanaagsan. Waqti waa inaad isla qaadataan sidaad u wadahadashaan, isku dhegeysataan oona isku dhistaan. Dhanka galmada dantaada keliya ha fiirsanin. Laakiin eeg qofka kale wuxuu u baahan yahay. Kitaabka wuxuu yiri: “Ha isdiidina, wakhti aad ku heshiisaan . . . mooyaane.” (1 Korintos 7:3-5) Si run ah waxyaalahan uga hadla. Dulqaadkiinna iyo isfahankiinna guurkiinna buu xoogeynayaa.
Ha iloobin inaad waqti isla qaadataan
Samee waxyaalaha yaryar oo jacaylkaaga muujiyo sida is siisiinta warqad ama hadiyad yar
3 CUNUGGIINNA TABABBARA
KITAABKA WUXUU BARAA: ‘Tan iyo yaraantaadii waxaad garanaysay qorniinka quduuska ah oo badbaadada ku garansiin kara.’ (2 Timoteyos 3:15) Sii diyaari waxaad cunuggaaga bari doontid. Xitaa intuunan dhalan wax badan buu baran karaa. Markuu weli uurka ku jiro codkaaga buu garanayaa. Haddii adna faraxsan tahay ama murugaysan tahay wuu dareemi karaa. Wax u akhri intuu yar yahay. Xitaa haddii uusan fahmin waxaad akhrinaysid waxay ku caawin kartaa inuu akhriska jeclaado markuu weynaado.
Cunuggaaga inuu maqlo adoo Ilaahay ka hadlaysid marna ka ma yaraa. Maqalsii markaad Yehowah baryaysid. (Sharciga Kunoqoshadiisa 11:19) Xitaa markaad isla ciyaaraysiin uga sheekee wuxuu Ilaahay sameeyay. (Sabuurradii 78:3, 4) Markuu ilmahaaga sii koro wuxuu arkayaa inaad Yehowah jeceshahay isagana wuu baranayaa inuu Yehowah jeclaado.
Si gaar ah Ilaahay xigmad u weyddiiso sidaad cunuggaaga u tababbartid
Siduu cunuggaaga wax u barto intuu yar yahay ugu soo celceli kelmedaha iyo fekradaha muhimka ah
CUNUG WANAAG BUU GUURKIINNA U KEENI KARAA
Waqti kaddib waalid isku kalsoon baad noqon doontaan. Koritaanka ilmaha wuxuu kuu badin karaa jacayl, dulqaad iyo raxmad. Haddii ad isla shaqeysaan oo is caawisaan markay ilmo imaaddaan guurkiinna wuu xoogoobayaa. Erayada Sabuur 127:3 run bay kuu noqon karaan: “Midhaha maxalku waa abaalgudkiisa.”
Toddobaadkii ugu dambeeyay sidee baan u muujiyay inaan qiimeeyo qofka aan guursaday wuxuu reerka u taro?
Goormaa noogu dambeysay inaan keligeen hadalno intaan ilmaha keliya ka hadli lahayn?
Wadaag Wadaag Cunug Siduu Guurka u Beddelo